Lori Loughlin ayaa ila soo wacday si aan talo u helo, sida uu sheegayo lataliye xabsi - dadku - WAA KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Lori Loughlin ayaa i soo wacday si aan talo u helo, sida uu sheegayo lataliye xabsi - dadka
La-taliye xabsi inta badan shaqaaleysiiya eedaysanayaashu si fiican u faaniyey si ay uga caawiyaan inay u jiheeyaan nidaamka cadaaladda dambiyada isla markaana u diyaargaroobaya nolosha ka dambeysa baararka ayaa sheegay inuu helay rafcaan aan caadi ahayn bishii Luulyo 24. Tani waxay ahayd qof dumar ah oo talo ka raadsatay eedeymaha la xiriira musuqmaasuqa musuqmaasuqa ee jaamacadaha.
Larry Levine, aasaasaha lataliyayaasha xabsiga xabsiga Street Street Wuxu yidhi, waxay aaminsan tahay in haweenaydu ahayd jilaa Lori Loughlin. Iyada iyo ninkeeda, Mossimo Giannulli, waxaa lagu eedeeyay in ay bixiyeen in ka badan 500 000 dollar oo laaluush ah gabdhahooda, Olivia Jade iyo Isabella Giannulli, si loogu ogolaado Jaamacadda Koonfurta Kaliforniya beenta beenta ah. in ay noqdaan koox ciyaartooy ah.
Wareysiga lala yeeshay wakaaladaan wararka, Levine waxay tiri haweeneyda, oo u yeeraysay talo kusaabsan "fadeexada kuliyada," waxay ahayd "doqon" mana u muuqan inay fahanto sababta loogu eedeeyay dambi federaal ah. Levine waxay kaloo sheegtay in haweeneydu aysan u muuqan inay garowday cawaaqibka diidmada heshiiskii qirashada - in go'aanka lagula dagaallamayo eedeymaha la macno ah in iyada iyo ninkeeda ay wajihi karaan xukun dheer xabsi xabsi. waxaa lagu helay dambi.
maxaa sababay in kiisaska qaarkood ay hoos yimaadaan awoodda federaalka halka kuwa kalena ay hoos imaanayaan xukunka gobolka, ”ayay tiri Levine. "Ma aysan fahmin. Waan u sharaxay isaga siday u shaqayso Waxay umuuqataa inay talo ka helayso dhowr qof waxayna raadineysaa qof u sheegta waxa ay rabto inay maqasho. "
Haweeneydu ma aysan aqoonsanin, laakiin iyada oo la eegaayo su'aalaheeda, Levine waxay tuhuntay inay tahay tii hore ee "Aqalka buuxa". "Aktarka. Wuxuu soo afjarayaa isagoo leh, "Lori, Waan ogahay inaad adigu tahay." Wuxuu yidhi haweenaydu way iska aamustay.
Levine sidoo kale waxay xustay astaamihiisa "Guriga Buuxa" iyagoo leh: "Dhageyso, Aabo Becky, waa inaad toostaa. "
Qareenka Loughlin kama uusan jawaabin codsi faallo.
Levine wuxuu sheegay in isaga iyo haweeneyda aysan si faahfaahsan u sharixin kiiskiisa. Si kastaba ha noqotee, wuxuu sharraxay inay tahay inuu dhowr jeer sharraxo fikradaha qaarkood, oo ay ku jiraan sababta wareejinta lacagta ee qof loo isticmaalo ujeedooyin sharci-darro ah loo tixgelin doono inuu yahay dambi federaal ah.
Ka dib markii uu ku qaatay sanado 10 sano xabsiyo kala duwan oo federaal ah dalka oo dhan ka dib markii lagu xukumay kufsi, cinwaanada Levine waxay ka saartay khibraddiisa shakhsiyadeed ee xeer-ilaaliyeyaasha, garsoorayaasha, iyo waraaqaha Xafiiska Maxaabiista Mareykanka.
Levine hadda waxay matalaysaa seddex ka mid ah waalidiinta hodanka ah ee 33 oo lagu eedeeyay fadeexada, oo loo yaqaan 'Operation Varsity Blues'. Waxay sidoo kale ahayd waraysi ay siisay bahda warbaahinta iyo xarumaha telefishanka fiilooyinka ee ku saabsan fadeexadda, taas oo ah sababta uusan u la dhicin inuu gebi ahaanba la yaabay Loughlin la xiriiray.
Levine waxay Loughlin ugu yeeraysaa "doqon". "Waxana cadeeyay inuusan ka fiirsaneynin inuu iyada macmiil u noqdo maxaa yeelay iyadu waxay ahayd" dalbasho ".
in wareysi hore oo ay weheliso wakaaladda wararkaan, Levine waxay sheegtay in Loughlin iyo ninkeeda "ay fursad weyn u heleen inay galaan heshiis u doodid".
Waaliddiinta kale ee lagu eedeeyay fadeexada, oo ay kujirto Aktarka Felicity Huffman, waxay sameysay heshiisyo qirasho iyagoo rajeynaya inay wadahadal badan la yeeshaan.
Ka dib markii Loughlin iyo Giannulli la sheegay inay diidaan inay qirtaan, xeer-ilaaliyeyaashu waxay heleen xukun ku saleysan xeerbeegti weyn oo ay ku jiraan eedeymo aad u daran oo musuqmaasuq iyo lacago sharci darro ah, oo mid walba oo ka mid ah uu ku dambeyn karo xukun ugu badnaan xabsi 20 sano ah. .
oo maxkamadda ka soo muuqan doona 27 bisha Agoosto ee soo socota, ayaa ballan qaaday dukumiintiyada maxkamadda in la soo bandhigo "Midnimo hore" Dagaalkooda si ay u caddeeyaan dambigooda iyagoo sii waday inay matalaan maxkamadaynta qareenno isla shirkad sharciga LA ah, sida ku cad dukumentiyada laga xareeyay Maxkamadda Degmadda Mareykanka ee Boston.
Diidmada muuqata ee labada qof ee ah inay qaadaan masuuliyadooda "waxay ciyaari doonaan marka xukunku dhacayo, waxaad khayaantay," ayuu raaciyay Levine. 659003] ku saabsan "hawlgalka dacwad soo qaadista federaalka," ayuu yiri Levine, qareennada Mareykanka guud ahaan ma gudbiyaan ashtako ka dhan ah xeer beegti weyn, mana raadsadaan in la caddeeyo xeerbeegtida weyn ilaa ay ka ma jiraan caddayn ku filan oo aan lagu qancin inay ku guuleysan karaan maxkamadaynta. Fadeexada ogolaanshaha kulleejyada, taasi micnaheedu waa inay hayaan dhamaan dukumiintiyada, jeegaga la saxeexay, waraaqaha e-maylka lagu diro, wicitaano taleefan la duubay iyo hadaladii ka soo baxay howl wadeenadii lama huraanka ahaa si loo caddeeyo in eedeysanayaashu uu ku lug lahaa falal musuqmaasuq, lacagta la dhaqay, ”ayuu ku yiri wareysi hore.
Levine, waxay tiri "way ku daaleen sidii ay kuu xukumi lahaayeen," waxay tiri iyada oo sharraxaad ka bixineysa sababta uu Loughlin "ku soo galay" isaga oo u maleynaya in iyada iyo ninkeeda ay ku qancin karaan xaakin iyo xeerbeegtida in ayan ahayn wax intaa ka badan. kaliya waalidiinta u go'ay ee raba sida ugu wanaagsan carruurtooda.
Levine wuxuu leeyahay isku mid buu u yiri racfaan qaataha.
Levine ma aysan weydiinin inta ay le'eg tahay inay ku shaqeyso, laakiin waxaan u sheegay, iyada oo ku saleysan eedeymaha, in ay jiri doonto meel ku dhow 36 illaa 60 bilood, "ayay tiri Levine. "Waxaan u sheegay, haddii aadan helin wax adag oo aad ku wareejiso dowladda federaalka, waqti ayaad badbaadin doontaa waana ay sii xumaan doontaa xitaa haddii aadan qaadan heshiis u doodid."
Waalidiinta lagu eedeeyay fadeexada, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah San Francisco Bay Area, ayaa la sheegay inay bixiyeen daraasiin, haddii aysan boqolaal kun oo doolar laaluush siin William "Rick" Singer, lataliyaha gelitaanka jaamacadda, si ay carruurtooda ugu seexdaan kuliyado sharaf leh. kor u qaaday ama si been abuur ah ugu tilmaamtay inay yihiin kuwa shaqaalaysiiya isboorti.
Macaamiisha Levine waxay saldhig ku leeyihiin Koonfurta Kaliforniya. Laba ayaa horey u qirtay dambiga waxayna sugayaan xukun, halka mid saddexaad uu galayo heshiis kaas oo ku lug yeelan doona iskaashi dheeri ah oo lala yeesho xeer-ilaaliyeyaasha.
Levine wuxuu sheegay inuusan la yaabin inuu aqriyo faallooyinkii ugu dambeeyay ee sharxaya kiiska Loughlin. gobolka maskaxda warbixin cusub joornaalka dadka
Ilo sharciyeed ayaa u sheegay Dadka in Lori Loughlin "qoomamo tahay" oo "ay ka xuntahay" ficillada keenay in iyada lagu eedeeyo fadeexada. Laakiin, sida laga soo xigtay Dadka, xiddigii hore ee Hallmark Channel wuxuu sii wadaa inuu rumeysan yahay inaysan wax qalad ah sameynin si ay lacag ugu siiso Singer.
"Daacadnimo, uma maleyneynin in waxa ay sameyneyso ay ka duwan tahay bixinta lacag maktabad ama garoon isboorti," il ayaa u sheegay Dadka.
Dhanka kale, "insider" ayaa leh ayaa usheegay usbuuclaha in Loughlin uu diyaar u yahay inuu aqbalo heshiis qirasho oo uu bixiyo ganaax aad u badan oo ah 2 milyan oo doolar, maaddaama aysan jirin xabsi. Waxay guriga joogi kartaa kormeeraha canqowga.
Nasiib darrose, waxay u badan tahay inay goor dambe daahday Loughlin inuu helo heshiiska noocaas ah. Halkaa markay marayso, ayuu insider us usbuucii usheegay: “Heshiis kasta wuxuu ku lug leeyahay xukun xabsi oo weyn.” Intaa waxaa sii dheer, Giannulli wali wuxuu doonayaa inuu is difaaco.
"Moss ma doonayo heshiis u-doodid wuxuuna rajaynayaa in si buuxda loo maxkamadeeyo," ayuu usheegay usbuuclaha usbuucii.